अहिले युवापुस्तामा अबेर रातसम्म निन्द्रा नपर्ने समस्या छ । ओछ्यानमा पल्टिएर मोवाइ चलाउने बानीका कारण मानिसको निन्द्रा नपुग्ने समस्या देखिएको हो ।तर यसरी निन्द्रा नपर्ने कारणले मानिसमा कुण्ठा पैदा हुने र शरीरमा नकारात्मक असर देखा पर्दछ । तसर्थ मानिसले दैनिक औसत ७ देखि ८ घण्टासम्म सुत्नुपर्दछ । आज हामी निन्द्रा नपर्ने समस्याका केहि समाधानबारे चर्चा गर्नेछौ ।
१. बेलुका ओछ्यानमा जानु १ घण्टाअघि अनिवार्य रुपमा मोवाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर एवम् टेलिभजन बन्द गर्नुहोस् ।२. ओच्छ्यानमा सुत्न त्यसबेला मात्र जानुहोस्, जब तपाईंलाई मज्जाले निन्द्राले च्याप्छ ।३. ओछ्यानमा पल्टिसकेपछि आखाँ बन्द गरेर सुत्ने प्रयाश गर्नुहोस्,जागै नबस्नुहोस् ।४. यदि ओछ्यानमा पल्टिएको २५ मिनेटसम्म पनि निन्द्रा नलागेमा उठेर आफूलाई अल्छी लाग्ने काम गर्न थाल्नुहोस् ।
५. राती निन्द्रा नपर्ने समस्या भएकाहरुले भुलेर पनि दिउँसो सुत्ने बानी बसाल्नु हुदैँन ।६. आफूले सुत्ने र उठ्ने समय तालिका नियमित एकै समयको पार्नुहोस् ।७. ओछ्यानमा जानुअघि ६ घण्टा पहिलेदेखि कफी, मदिरा र निकोटिनको प्रयोग नगर्नुहोस् ।८. रातको खाना खाइसकेपछि साधारण काममा व्यस्त हुनुहोस् ।९. भोको पेट वा धेरै खाएमा पनि राम्रो निन्द्रा पर्दैन त्यसैले ठिक्क मात्र खानुहोस् ।१०. सुतेको समयमा फोनमा कुराकानी गर्ने बानी त्याग्नुहोस् ।एजेन्सी